XZ320D qoditaanka jihada jihada jihada ah
XZ320D qoditaanka jihada jihada jihada jihada leh wuxuu leeyahay dhexroor ugu badnaan 800mm, ugu badnaan xoog riixitaan ah 320kN, Xuddunta 12000N · m, iyo miisaanka mashiinka qaawan ee 10t.
XZ320D HDD wuxuu leeyahay qaab dhismeed is haysta, waxqabad aad u fiican, shaqooyin dhameystiran, kontoroolka tijaabada haydiga, xakamaynta sagxadda iyo pinion, iyo xuduudaha waxqabadka ugu weyn iyo teknolojiyadda xakamaynta ayaa gaaray heer caalami oo heer sare ah. Nidaamka Haydarooliga, Nidaamka Awoodda, Nidaamka Howlgalka iyo qeybaha ugu muhiimsan dhammaantood waxay ka sameysan yihiin alaab sumadeed heerka koowaad ee gudaha oo leh waxqabad wanaagsan iyo kalsooni.
Astaamaha Hordhaca XZ320D HDD
Nidaamka si buuxda ayaa loo casriyeeyay, dhismuhu waa mid hufan oo tamar-badbaadin ah, xawaaraha riixitaanka ayaa la kordhiyay, wareegga korantada iyo xawaaraha hoose ee korantada, xawaaraha isku haynta ayaa kor loo qaaday, iyo hawlgalka rig iyo waxtarka dhismaha si weyn wanaajiyay.
2.Rack and pinion sliding, si loo hubiyo xasilloonida Gawaarida iyo isku halaynta wadista hawlgalka.
3. Teknolojiyada laba-geesoodka ah ee madax-furashada ee madaxa awoodda iyo tiknoolajiyada laba-geesoodka ah ee loo yaqaan 'vise' ayaa si weyn u ilaalin kara dunta tuubada qodista waxayna kordhin kartaa nolosha adeegga tuubada layliga.
Nidaamyada xawaaraha sare iyo wareejinta xawaaraha sare, matooriga isbeddela si loo gaaro isbeddel xawaare sare iyo mid hooseeya, kordhinta awoodda la qabsiga xaaladaha qodista qodista, hagaajinta waxtarka dhismaha qodista qodista.
5.Taageerada baahiyaha kaladuwan ee macaamiisha, mashiinka waxaa lagu kordhin karaa aaladda biibiile qodista tooska ah, nidaamka isdabamarinta otomaatiga ah, bilowga qabow, dhoobada dhaxanta, dhaqida dhoobada, dhoobada iyo qalabka kale.
154/2200 kW / r / daqiiqo
Waxyaabaha Ikhtiyaar Isku habee
Mashiinka QSB5.9-C210 Mashiinka ShiinahaⅢ ☑
6BTAA5.9-C205 Mashiinka Shiinaha II □
Bilow qabow Bilow qabow ☑
Barroosinka Barroosin fudud ☑
Barroosinka hal otomaatiga ah □
Barroosinka otomaatigga ah ee laba-laabma □
Nidaamka dhoobada Qabow qabow □
Nadiifinta dhoobada □
Pipeloader Semi-otomaatiga dhajiska ah □
Tuujiye-buuxa oo otomaatig ah □
Qaabeynta qaybta ugu weyn
Magaca Warshad soo saar
Mashiinka Dongfeng Cummins
Bamga Weyn Permco
Saar Caawiyaha Permco
Motor Rotary / Riix Motor Eaton
Riix Mootada / yareeyaha XCMG
Mashiinka XZ320D HDD wuxuu bilaabmaa markuu la socdo liiska xirxirashada, ku dar dukumiintiyada farsamo ee soo socda ：
Shahaadada alaabada / Buugga wax soo saarka / Qaybaha alaabta ee Atlas / Buugga dayactirka mashiinka / Buug yaraynta
Isticmaalka bamka dhoobada iyo buugga dayactirka
Hore: XRS8 / 45 qashin qodista wareega
Xiga: XZ400 Rigta Jihada Jihada Jiifka ah
mashiinka qodista ceelka
qodista jihada jihada
XZ2200 jiingad qodista jihada jihada
XZ3600 Riig Gawaarida Jihooyinka Horizontal
Qalab Qodista Jihooyinka Horizontal, HDd rig, mashiinka qodista ceelka, mashiinka qodista hdd,